रोशीको नार्केमा प्रेसर कुकर जस्तो देखिने पदार्थ बिष्फोट ! – Radio Roshi
रोशीको नार्केमा प्रेसर कुकर जस्तो देखिने पदार्थ बिष्फोट !
in अपराध / रोशी खबर / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	March 22, 2020
जिल्लाको रोशी गाउँपालिका वडा नं ८ नार्केमा विस्फोट भएको छ । रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डि.बि. लामाले बेलुका ८ः४० बजे बिष्फोट भएको पुष्टी गरेका छन् । यध्यपी कसले र किन पड्कायो भन्नेबारे जानकार नभएको बताए ।
विष्फोटक पदार्थ पड्किँदा मानवीय क्षती भने नभएको र नजीकै रहेको निर बहादुर लामाको घरको सटरमा सामान्य चोईटा निस्किएको बताए । विष्फोट हुनासाथ रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिबी लामा घट्नास्थलमा पुगेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख रवी कुमार पौडेलका अनुसार सानो विश्फोटक पदार्थ जस्तो पड्कीएको खबर छ, कस्ले, कसरी र किन पड्कायो भन्ने पुष्टी भएको छैन भनेका छन् । प्रहरीहरु घटना स्थल पुगेको र आवश्यक अनुसन्धान भईरहेको बताए ।
स्थानीयका अनुसार सानो प्रेसर कुकर जस्तो देखिने पदार्थ पड्कीएको हो । घटना स्थलमा अहिले मंगलटार इलाका प्रहरी र कटुञ्जे प्रहरी चौकीबाट प्रहरी पुगेका छन् ।